बलिउड नायिका करिश्मा कपूर नेपालमा, सानो कामका लागी पनि लिइन् त्यति मोटो रकम ? – rastriyakhabar.com
बलिउड नायिका करिश्मा कपूर नेपालमा, सानो कामका लागी पनि लिइन् त्यति मोटो रकम ?
काठमाडौँ । बलिउड नायिका करिश्मा कपूर नेपाल आइपुगेकी छन् । राजधानीमा मेरिगोल्ड सयपत्री ज्वेलर्सको ग्रान्ड ओपनिङ सेरेमोनीमा विशेष अतिथिका रुपमा करिष्मा नेपाल आएकी हुन् । उक्त शोरुमको उद्घाटनका लागीमात्र करिश्माले भारु १६ लाख रुपैयाँ लिएको बताइएको छ ।
यसअघि पनि नेपाल आएक िकरिश्मा दिल्लीको इन्डिया गेटनजिक बिकानेर भवनमा भएको फेसन वीकमा नेपाली डिजाइनर प्रिया राउतद्वारा निर्मित पहिरन लगाएर स्टेजमा जाँदा उनको ब्यापक चर्चा भएको थियो । उनको यो देस्रो नेपाल भ्रमण हो ।